विदेशबाट काठमाडौँ आईपुग्यो विमान, कार्टुन फुस्काएर हेर्दा प्रहरी नै चकित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विदेशबाट काठमाडौँ आईपुग्यो विमान, कार्टुन फुस्काएर हेर्दा प्रहरी नै चकित
बीबीसी । चिम्पान्जी तस्करीबारे गत वर्ष सञ्चार माध्यमको अनुसन्धानबाट भएको खुलासाका आधारमा नेपाल प्रहरीले सो संरक्षित वन्यजन्तु तस्करी गर्ने एउटा प्रयास विफल पारिदिएको छ। उद्धार गर्दा बूढीऔँला चुसिरहेका थकित अनि भोका चिम्पान्जीका दुई बच्चा देखेपछि प्रहरीहरू नै स्तब्ध हुन पुगेका थिए।
नाइजिरियाको वनमा समातिएका ती वनमान्छेका बच्चालाई तस्करहरूले विमानमा लुकाएर हजारौँ किलोमिटर टाढा नेपाल ल्याइपुर्‍याएका थिए।नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान प्रमुख अनुपम राणा भन्छन्, तिनीहरू साना बच्चाजस्तै थिए। लट्ठ्याउने औषधी दिएर सामान राख्ने बट्टामा लुकाइएका यी वन्यजन्तु ओसार्न छ देशमा सक्रिय वन्यजन्तु तस्करहरूको सञ्जाल सक्रिय भएको थियो।
चिम्पान्जी सङ्कटापन्न जीव भएपनि तिनलाई घरमा पाल्नका लागि तस्करी गर्ने गरिएको छ। एउटाको १२,५०० डलर ९झन्डै १४ लाख रुपैयाँ० मूल्य राखेर तिनलाई अवैध रूपमा बेच्न लागिएको थियो। विश्वभरी प्रत्येक वर्ष हुने अर्बौँ डलर बराबरका वन्यजन्तुको तस्करीबारे यसै साता लन्डनमा आयोजित वन्यजन्तुको अवैध व्यापारसम्बन्धी सम्मेलनमा छलफल हुँदैछ।
भयावह बनिरहेको चिम्पान्जी तस्करी भएको अनुसन्धान र खुलासाबारे समाचार हेरेका काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीहरूले यी दुईको उद्धार गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीको सुरक्षा कारबाहीपछि ९ जना तस्कर पक्राउ परेका छन्। यी चिम्पान्जीका बच्चालाई उत्तरी नाइजिरियामा सिकारीहरूले समातेर एक पाकिस्तानी व्यक्तिलाई बेचिएको आशङ्का गरिएको छ।